Mbido nke Vivo Nex 3 5G ka ekwenyela na Septemba | Gam akporosis
Mbido nke Vivo Nex 3 5G ka ekwenyela na Septemba
Na mgbasawanye nke Teknụzụ 5G Gburugburu ụwa, enwere ọtụtụ ekwentị azubere site na nkwado maka njikọ a nke ga-erute ahịa ahụ n'aka ndị nrụpụta ha. Vivo bụ otu n'ime ndị ga-ebupụta ọdụ ụgbọ elu 5G dị elu n'oge na-adịghị anya, ma kwupụtara nke a site na akaụntụ Weibo.
Li Xiang, onye njikwa ngwaahịa Vivo, na-ahụ maka ikpughe na Vivo Nex 3G, mobaịlụ anyị na-enye amara ugbu a, ga-ada n'ahịa n'ọnwa na-abịa. Na mgbakwunye, iji mee ka mkpughe ahụ dị ezigbo ụtọ, ọ gbakwunyere ụfọdụ nkọwa banyere ihe ngwaọrụ a ga-ewetara anyị, n'ihe gbasara njirimara na nkọwapụta teknụzụ.
Dị ka anyị na-ekwu, A ga-ebido Vivo Nex 3 5G na Septemba. Agbanyeghị, anyị amaghị mgbe ọrụ ya na ahịa ga-eme, mana anyị na-eche na ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ya n'etiti ọnwa ahụ, ebe ọ bụ na anyị emechaala nke a ma ọ ga-abụ na ụbọchị na-eso anyị ga-anata ya yana nkọwa ya niile. Mgbe ha na-ekwupụta ọkwa na Weibo, ụlọ ọrụ ahụ tinyere ihe oyiyi nke nwere ihe odide nke gụrụ, “Lee ọ na-abịa! Mwepụta nke # 5G Vivo NEX 3 na Septemba!
Vivo Nex 3 Leaked ụdịdị
Onyogho ọzọ, na-akọwapụta nkọwa ndị bụ isi nke ọbịbịa ama na-abịanụ, gbara agba na ntanetị wee gosipụta nke ahụ ngwaọrụ ahụ ga-abịa site na nha ihu igwe na-enweghị oke 99.6%, yana igwefoto 64 MP. Enwere ike ịnye ọnụọgụ ihuenyo dị elu dị elu n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ ejirila usoro nhazi ihuenyo, enwere ike ịhụ nke a ihe osise gị.
N'okpuru, smartphone ga-akwado ya site octa-core processor Snapdragon 855 Plus site na Qualcomm, nke ewepụtara n’oge na-adịbeghị anya dị ka mmelite egwuregwu na flagship Snapdragon 855 chipset.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mbido nke Vivo Nex 3 5G ka ekwenyela na Septemba
Na-asọpụrụ President na-akwado Na-asọpụrụ V30 ga-abịa na 5G Nkwado
Gam akporo 10: goodbye na-eji megharịa ọnụ aha na gam akporo okè